धमाधम लाभांश पारित गर्दै बैंकहरु, कुन बैंकले कति प्रतिशत घोषणा गरे ? –
धमाधम लाभांश पारित गर्दै बैंकहरु, कुन बैंकले कति प्रतिशत घोषणा गरे ?
२०७७ पुष ३, शुक्रबार , ११:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बिहीबार मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंक र निजी क्षेत्रको लगानीको मेगा बैंकले गत आर्थिक वर्षको मूनाफाबाट लाभांश दिने घोषणा गरे । जसमा नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश ९कर सहित० गरी कुल १६ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ ।
उता मेगा बैंकले पनि बिहीबार नै १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर सहित ३।०५ प्रतिशत नगद गरी कुल १३।०५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यि दुइ बैंकसहित हालसम्म २७ वाणिज्य बैंक मध्ये २० बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् ।
अन्य बैंकहरु पनि लाभांश घोषणाको तयारीमा जुटेका छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै घोषण गर्नेमा हिमालयन बैंक र एनआइशी एशिया बैंक देखिएका छन् । सबैभन्दा कम लाभांश घोषणा गर्नेमा सेञ्चुरी कमर्शीयल बैंक देखिएको छ ।
हिमालयन बैंकले ६ प्रतिशत नगद लभांश र १४ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव गरेको छ । उता एनआइशी एशियाले भने १९ प्रतिशत बोनस र १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, आकर्षक बोनस दिने नविल बैंक लगायतका आधा दर्जन बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।
कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले घोषण गरेको लाभांश साधारणसभाबाट पारित समेत गराइसकेको छ । अन्य बैंकहरुले भने सभाबाट पारित गराउन बाँकी छ ।
हेरौं कुन बैंकले कति दिदैछन् लाभांश ?
अक्सिजन सिलिण्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना
सत्ती भन्सार खक्रौलामा आगलागी
कैलाली क्षेत्र नं. १ मा राप्रपाले बिभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो
अक्सिजन सिलिण्डर बोकेको ट...
कैलालीमा संक्रमित बढेपछि...
सत्ती भन्सार खक्रौलामा आग...
फरुवा हानेर श्रीमतीले गरि...
टीकापुरमा ब्राउनसुगर सहित...
भारतसँग जोडिएका सीमा नाका...
Prevपछाडीराजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै राप्रपाले गर्‍यो संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
अगाडी६५ वर्ष पुगेका पत्रकारलाई मासिक १० हजार जीवन निर्वाह भत्ताNext